Similipal Bhitarkanika 4 Habeenka / 5 Maalmaha - Luxury Tours India - Turka Hindiya Bhubaneswar - 91-993.702.7574
Intercity - SIMULIPAL BHITARKANIKA
Dhul - yaryar ayaa la arkay
Ka mid noqoshada kale
Xilliga Maalinta Xajmiga / 4 Waqtiga Maalmaha Tirada
Category: Bhitarkanika Tag: Xirmada qoyska
CAYAARKA TOUR: Per Person Per Tour Basis (Guud ahaan)
Qiimaha hooseeya ma shaqeynayo inta lagu jiro xilliga fasaxa (Durga Puja, Sannadka Cusub & Chistmass, Fasaxyada Qaranka, RathaYatra Period, mudada Holi)
02 Dadka 33,679.00 33,679.00 33,679.00 33,679.00
04 Dadka 23,586.00 23,586.00 23,586.00 23,586.00
06 Dadka 21,315.00 21,315.00 21,315.00 21,315.00
08 Dadka 24,268.00 24,268.00 24,268.00 24,268.00
10 Dadka 21,725.00 21,725.00 21,725.00 21,725.00
Sariir dheeraad ah 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00
Markii uu yimaado Jidka tareenka ee Bhubaneswar Station / Airport-ka ee u wareejinaya Bhitarkanika. Waddada booqashada Ratnagiri, Udayagiri & Lalitgiri (Budistiska Monasteries iyo Stupas). Imaansho ka socda Sandbirdhiga Sandbarsiyada Jungle Resorts. Ka dib markii qurux badan oo guriga la dhigo KalibhanjaDiha Island ee ku taala doonnida xeebta ee ay u ansaxisay Waaxda Duurjoogta ee ay u ansixisay Waaxda Duurjoogta, inay ku raaxaystaan ​​aragtida cabsida Ramsarsite. Dib u raaxaysiga dabka xeryaha Cuntooyinka iyo Cunitaanka Cunnada ee Sandbugska Jungle Resorts.
Kadib booqasho qaab quruxsan oo guriga ah Quraac booqanaya Bird Sanctuary, wuxuu u socdaalayaa Minaaradda Awoodda ee Boqorada Hore iyo safar gaaban oo ku saabsan doonnida kala duwan ee ku taala doontada baadiyaha ah ee ay ansixisay Waaxda Duurjoogta, inay sheegto Yaxaasyada, booqashada Matxafka iyo Mashruuca. Qadada ka dib, ku raaxee quruxda dabiiciga ah ee dabiiciga ah iyo cawska. Gelinka dambe ee galabnimo booqashada macbadka Jagannath si aad uga qayb qaadatid Live AalatiDarshan. Fiidnimadu waxay ku raaxeeyaa xerada Cuntada iyo Cunnada, habeenkii oo ka dhacaya Sandbugsiyada Jungle Resorts.
Ka dib markii quraac qurux badan oo qurux badan ay booqanayaan Similipal Tiger Reserve. Soo gal-galka hudheelka. Ka dib qado dabeecadda dabeecadda iyo dabeecadda dabeecadda ee xannaanada beeraha, booqo Qeybta Cuntada. Casho iyo habeenkii habeenkii Similipal.
Kadib quraac, u wado Socdaalka Saldhigga Balasoor / Saldhigga Bhubaneswar si aad u safarto.
Noqo midka ugu horeeya ee dib u eega "Maalinta Caadiga ah ee Bhitarkanika 4 Night / 5" Cancel reply
₹5,499.00 Ku dar gaadhigii
₹8,500.00 Ku dar gaadhigii